M/weynaha Puntland Oo berri subax kusii jeeda Kismaayo & Wafdigii Federaalka oo xaaladdu ku adkaatay.
BOOSAASO(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes.com wararka uu ka helayo magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in Puntland ay si cad u diiday in ay ka baaqsato Caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, iyadoo wararku sheegayaan in hadalka ugu badan ee wafdiga dawladda Soomaaliya uu ahaa in laga baaqsado tagida Kismaayo.
Wasiiradda Xukuumadda Soomaaliya ayaa u soo jeediyey Madaxweynaha Puntland Siciid Deni in ay muhiim tahay in la dhawro siyaasadda dawladda Faderaalka, waxayna mudo ka badan 3 saacadood oo ay wada hadal lahaayeen dhinacyadu uu kusoo dhamaaday wareegii koowaad natiijo la’aan.
Casho loo sameeyey wafdiga Federaalka ayaa hadda soo dhamaatay, waxaana markale ay dhinacyadu iskugu laabteen wada hadaladooda oo ay uga hadlayaan xaaladda labada dhinac, lamana filayo in ay go`aamo buuxa kasoo baxana.
Madaxweynaha Puntland ayaa berrito u duulaya magaalada Kismaayo, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo Aqalka Madaxtooyada ee Boosaaso, balse lama garanayo duulimaadka qaadi doono.
Siciid Deni wuxuu dhawaan sheegay in aysan jirin cid ka celin karta Kismaayo, wuxuuna sheegay in uu tagayo Caleema-saarka dhigiisa Jubbaland Axmed Madoobe oo horey isagaba ugu yimi caleema-saarkiisii magaalada Garoowe.